Xog la helay: hubkii ay waday diyaadii burburtay ee Ethiopia oo warar xaqiiqa ah laga helay halka uu ku socday. | warsugansomaliya.wordpress.com
Iyada oo ay dhawaan ay ku burburtay garoonka diyaarasaha Aadan Cadde ee magaalada Muqsisho diyaarad ay leeyihiin ciidamada Cirka ee dalka Ethiopia taas oo waday saanad meleteri ayaa waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku aadan halka uu ku wajahnaa hubkaasi.
Warar laga helaayo ilo lagu kalsoonyahay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqayaan in saanada Meleteri ee diyaaradaasi waday ay laheyd dowlada Soomaaliya lana doonanay in lagu qalabeeyo ciidamo dhawaan tababar loo soo xiray si ay ugu biiraan ciidanka qalabka sida ee halganka ugu jira difaaca dalka Soomaaliya.
Ilo wareedyadu waxa ay intaa ku darayaan in xilligii diyaaradu dheceysay ay gegada diyaadaha Muqdisho ay ku sugnaayeen saraakiishii hubkaasi gacanta ku dhigi laheyd oo uu kamid ahaa sarkaalka dhanka saadka u qaabishan meleteriga kaas oo watay gaadiid badan oo hubka uu ugu daabuli lahaa madaxtooyada dalka si halkaasi loogu xareeyo ilaa ciidanka looga wareejinaayo.
Shilka diyaarada saanada ciidan waday oo dowlada Soomaaliya lama filaan ku noqotay ayaa waxa ay dib u dhac kii ugu darnaa ku noqotay howla dhanka ilaalinta dalka ah oo meel wanaagsan marayay oo ay kamid tahay in ciidankii tababarka loosoo xiray ee la qalabeyn lahaa tababar dib loogu celiyay maadaama aan loo heyn hub ay ku holw galaan laguna sii heyn doono xerada tababarka ilaa dalka uu kasoo gaarayo hubkii iyo saanadii ciidan ee lagu qalabeyn lahaa.
Dowlada Soomaaliya oo si layaab leh uga jawaabtay warbixintii monitoring group ay dhawaan kasoo saartay madaxda qaranka.
← Qaraxyo xoogan oo maanta lala eegtay Gawaari ay wateen ciidamo katirsan Dowlada iyo AMISOM oo siyaabo kala duwan u dhacay
Alshabaab oo soo bandhigtey Filim Soomaali-American u dagaalamaysa iyo Saxaafadda oo Ka hadashay!!(Daawo Muuqaal+Warbixin) →